Ụgbọ elu London ọhụrụ si New York, Denver, San Francisco na Boston na United Airlines
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu London ọhụrụ si New York, Denver, San Francisco na Boston na United Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA
Ụgbọ elu London ọhụrụ si New York, Denver, San Francisco na Boston na United Airlines.
Lọndọn bụ ebe mba ụwa kacha enye akwụkwọ maka ndị ahịa azụmaahịa United na Ọktọba, ụgbọ elu ahụ na-atụkwa anya na omume a ga-aga n'ihu na 2022.
United Airlines na-ekwupụta ụgbọ elu ise ọhụrụ si obodo anọ US gaa ọdụ ụgbọ elu Heathrow London.
United Airlines ga-enye ụgbọ elu 22 kwa ụbọchị gaa London, United Kingdom site na mmiri nke 2022.
Ozugbo ọrụ malitere, United ga-enye ọtụtụ ụgbọ elu n'etiti New York City na London karịa ụgbọ elu US ọ bụla.
United Airlines taa mara ọkwa na ọ na-agbakwunye ụgbọ elu ise ọhụrụ na London Ọdụ ụgbọ elu Heathrow, gụnyere ụgbọ elu abụọ ọzọ si New York/Newark, njem ndị ọzọ sitere na Denver na San Francisco, yana ụgbọ elu ọhụrụ sitere na Boston. Ọrụ ọhụrụ a na-amalite na Machị nke afọ 2022 yana mgbakwunye ndị a, United ga-abụ naanị ndị na-ebu US na-enye ọrụ anaghị akwụsị n'etiti ahịa azụmaahịa asaa kachasị na mba na London. United ga-enye ụgbọ elu 22 kwa ụbọchị site na US gaa London, yana ụgbọ elu ndị ọzọ n'etiti New York City na London karịa ụgbọ elu US ọ bụla. Lọndọn bụ ebe mba ụwa kacha enye akwụkwọ maka ndị ahịa azụmaahịa United na Ọktọba, ụgbọ elu ahụ na-atụkwa anya na omume a ga-aga n'ihu na 2022.
Patrick Quayle, onye isi osote onye isi ala mba ụwa kwuru, "Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30, United ewepụtala njikọ dị oke mkpa n'etiti US na London, na-arụ ọrụ n'oge ọrịa a niile na-eto eto n'usoro usoro anyị iji mee ka ndị ahịa anyị nọrọ na isi ụlọ ọrụ azụmaahịa zuru ụwa ọnụ." netwọk na njikọ aka na United Airlines. "London bụ akụkụ dị mkpa nke netwọkụ United States ma anyị nwere obi ike na ọchịchọ ga-aga n'ihu na-eto eto, karịsịa ka njem azụmahịa mba ụwa na-alaghachi na 2022."
Ụgbọ elu ọhụrụ ndị a na-ewu na United kasị ukwuu-mgbe trans-Mgbasawanye Atlantic ekwuputara na mbido ọnwa a. United na-arụ ngụkọta ụgbọ elu asaa ugbu a Heathrow site na US: ụgbọ elu abụọ kwa ụbọchị si New York/Newark na Washington DC, na otu ụgbọ elu kwa ụbọchị si Chicago, Houston na San Francisco. Na Disemba, ọrụ ga-abawanye ruo ụgbọ elu 10 kwa ụbọchị, yana ụgbọ elu ndị ọzọ sitere na New York/Newark na Chicago, naanị n'oge ezumike oyi.
Ụgbọ elu ise ọhụrụ a ga-eme ka ịfefe n'ọdọ mmiri ahụ dị mfe ma dịkwuo mma maka ma ntụrụndụ ma ndị njem azụmahịa, dịka United Airlines uche:
Malite ụgbọ elu ọhụrụ, ụgbọ elu kwa ụbọchị sitere na Boston ejiri Boeing 767300ER adịchaghị arụ ọrụ, nke nwere oche klaasị azụmahịa United Polaris 46 yana oche akụ na ụba United Premium Plus® 22.
maliteghachi ụgbọ elu kwa ụbọchị site na Denver wee gbakwunye ụgbọ elu nke abụọ kwa ụbọchị nke Boeing 787-9 na-arụ.
Tinye ụgbọ elu nke isii na nke asaa kwa ụbọchị site na New York/Newark, nke ọ bụla ga-arụ ọrụ site na United's premium Boeing 767-300ER ma nye ohere maka ọrụ kwa elekere na mgbede.
Tinye ụgbọ elu nke atọ kwa ụbọchị site na San Francisco nke Boeing 787-9 na-arụ.
Malitegharịa ọrụ kwa ụbọchị na London site na Los Angeles.